KENYA oo si aan gambasho laheyn u sheegtay in ay difaacayso m/weynaha Jubbaland Axmed Madoobe! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta KENYA oo si aan gambasho laheyn u sheegtay in ay difaacayso m/weynaha...
KENYA oo si aan gambasho laheyn u sheegtay in ay difaacayso m/weynaha Jubbaland Axmed Madoobe!
Nairobi (Halqaran.com) – Dowladda Kenya ayaa si aan gambasho laheen shaaca ka qaaday, in ay difaacayso Madaxweynaha maamulka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe), oo loolan dhanka siyaasadda ah kala kulmaya Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Wargeyska Hivisasa ayaa qoray war laga soo xigtay Afhayeenka Ciidanka Kenya Paul Njuguna oo sheegaya in Ciidamada Kenya aysan ka bixi doonin magaaladda Kismaayo, ama meel ka mid ah Jubbaland, sababo la xiriira xulafaysiga Madaxweyne Axmed Madoobe.
Mr. Paul Njuguna ayaa sheegay in Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Madoobe uu yahay siyaasiga runta ah ee xulufada la ah Dowladda Kenya.
Dhanka kale, Afhayeenka Ciidanka Kenya Paul Njuguna ayaa beeniyay wararka ku aadan in Ciidamadda Kenya ay ka baxayaan magaalada Kismaayo, islamarkaana magaaladda la wareegayaan Ciidamo Itoobiyaan ah oo ka tirsan AMISOM.